နိုင်ငံတကာ ဆန်ဈေးကွက် သုံးသပ်ချက်
Post byဘင်္ဂလုရု၊ အိန္ဒိယ on Sunday, February 18,2018
ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ ဆန်ဝယ်ယူရေးစာချုပ်ချုပ်ရာမှာ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်က ကြန့်ကြာနေတဲ့အတွက် ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဟာ ထိုင်းဘက်ကနေ ဆန်ဝယ်မယ့်အစီအစဉ်ကို ပယ်ဖျက်လိုက်ပါတယ်။ ပြည်ပကသိပ် အ၀ယ်မလိုက် တဲ့အတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ ဒီတစ်ပတ်မှာ ဆန်ဈေးတွေကျနေပါ တယ်။
ရေကြီးလို့ သီးနှံတွေပျက်စီးကုန်တဲ့အတွက် ဆန်အများအပြားတင်သွင်းနေရတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဟာ ထိုင်းနိုင်ငံကနေ ဆန်တန်ချိန် တစ်သန်းခွဲကို တစ်တန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၆၅ နဲ့ တင်သွင်းဖို့ အောက်တို ဘာလကတည်းက စီစဉ်ထားတာပါ။
“သူတို့က စာချုပ်ကို အပြီးသတ်ဖို့ ကျန့်ကြာနေတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့က ပယ်ဖျက်လိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အခု အိန္ဒိယဘက်ကနေလည်း ၀ယ်လို့ရနေပါတယ်။ ဒေသတွင်းမှာ ၀ယ်ယူရေး အစီအစဉ်ကလည်း ကောင်းမွန်နေပါတယ်”ဟု ဆန်ဝယ်ယူရေးအကြီးအကဲ ဘဂ္ဂရူ ဟာဆန်က ပြောပါ တယ်။
အိန္ဒိယမှာတော့ ငါးမှန်ဆန်တစ်တန်ဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂ ဒေါ်လာ ကျသွားတဲ့အတွက် အခုအခါမှာ တစ်တန်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၂၀ ကနေ ၄၂၄ အထိသာရှိပါတော့တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်တွေတုန်းကတော့ အိန္ဒိယဆန်ဈေးဟာ ၂၀၁၁ ခုနှကနေ အခုအချိန်အထိ အမြင့်ဆုံးကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
“အ၀ယ်သိပ်မလိုက်ဘူး။ ၀ယ်မယ့်လူတွေကလည်း နောက်ထပ်ဈေးကျမှာကို မျှော်လင့်ပြီးတော့ ၀ယ် မယ့် အစီအစဉ်တွေကို ရွှေ့ဆိုင်းတာတွေရှိနေပါတယ်”လို့ အန်ဒရာ ပရာဒက်ရ်ှအခြေစိုက် ကုန်သည် တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ ဧပြီလကနေ ဒီဇင်ဘာလအထိ ဆန်မွှေးမဟုတ်တဲ့ ဆန်တင်ပို့မှုဟာ အရင်နှစ် ကာလတူထက် ၃၉ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း တက်လာခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ပမာဏ တန်ချိန် ၆ ဒသမ ၂၄ သန်း တိုးတက်လာခဲ့တယ်လို့ အစိုးရက ထုတ်ပြန်တဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ငါးမှန်ဆန်တစ်တန်ဟာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၂၀-၄၃၀ ရှိနေရာက အခုအပတ်မှာတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၀၀-၄၁၉ အထိ ကျသွားခဲ့ပါတယ်။
“ဆန်တင်ပို့တဲ့ ကုန်သည်တွေက အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ အီရန်နဲ့ တရုတ်လို ဈေးကွက်အကြီးကြီး တွေကို စောင့်နေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအထိတော့ ကမ်းလှမ်းလာတာ မရှိသေးပါဘူး”လို့ ဘန်ကောက် အခြေစိုက် ကုန်သည်တစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။
“ဒီတစ်ပတ်မှာ ဈေးက အပြောင်းအလဲမရှိပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဆန်စက်တော်တော် များများက တရုတ်နှစ်သစ်ကူးမို့ ပိတ်ထားကြပါတယ်”လို့ အခြားကုန်သည်တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
တရုတ်နှစ်သစ်ကူးဟာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အစိုးရ ရုံးပိတ်ရက်မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လုပ်ငန်း တော်တော်များများကတော့ အလုပ်ပိတ်ကြပါတယ်။
ထိုင်းဘတ်ဈေးမာနေတာကလည်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် ဆန်ဈေးကျသွားစေပါတယ်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာကတော့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်ကနေ ၂၀ ရက်နေ့အထိ ဈေးကွက်ပိတ်ပါတယ်။
ထိုငျးနိုငျငံနဲ့ ဆနျဝယျယူရေးစာခြုပျခြုပျရာမှာ ထိုငျးနိုငျငံဘကျက ကွနျ့ကွာနတေဲ့အတှကျ ဘင်ျဂလား ဒရှေျ့နိုငျငံဟာ ထိုငျးဘကျကနေ ဆနျဝယျမယျ့အစီအစဉျကို ပယျဖကျြလိုကျပါတယျ။ ပွညျပကသိပျ အဝယျမလိုကျ တဲ့အတှကျ အိန်ဒိယနိုငျငံနဲ့ ထိုငျးနိုငျငံမှာတော့ ဒီတဈပတျမှာ ဆနျစြေးတှကေနြပေါ တယျ။
ရကွေီးလို့ သီးနှံတှပေကျြစီးကုနျတဲ့အတှကျ ဆနျအမြားအပွားတငျသှငျးနရေတဲ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံဟာ ထိုငျးနိုငျငံကနေ ဆနျတနျခြိနျ တဈသနျးခှဲကို တဈတနျ အမရေိကနျဒျေါလာ ၄၆၅ နဲ့ တငျသှငျးဖို့ အောကျတို ဘာလကတညျးက စီစဉျထားတာပါ။
“သူတို့က စာခြုပျကို အပွီးသတျဖို့ ကနျြ့ကွာနတေဲ့အတှကျ ကြှနျတျောတို့က ပယျဖကျြလိုကျရပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့အခု အိန်ဒိယဘကျကနလေညျး ၀ယျလို့ရနပေါတယျ။ ဒသေတှငျးမှာ ၀ယျယူရေး အစီအစဉျကလညျး ကောငျးမှနျနပေါတယျ”ဟု ဆနျဝယျယူရေးအကွီးအကဲ ဘဂ်ဂရူ ဟာဆနျက ပွောပါ တယျ။
အိန်ဒိယမှာတော့ ငါးမှနျဆနျတဈတနျဟာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၁၂ ဒျေါလာ ကသြှားတဲ့အတှကျ အခုအခါမှာ တဈတနျကို အမရေိကနျဒျေါလာ ၄၂၀ ကနေ ၄၂၄ အထိသာရှိပါတော့တယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ ရကျသတ်တပတျတှတေုနျးကတော့ အိန်ဒိယဆနျစြေးဟာ ၂၀၁၁ ခုနှကနေ အခုအခြိနျအထိ အမွငျ့ဆုံးကို ရောကျခဲ့ပါတယျ။
“အဝယျသိပျမလိုကျဘူး။ ၀ယျမယျ့လူတှကေလညျး နောကျထပျစြေးကမြှာကို မြှျောလငျ့ပွီးတော့ ၀ယျ မယျ့ အစီအစဉျတှကေို ရှဆေို့ငျးတာတှရှေိနပေါတယျ”လို့ အနျဒရာ ပရာဒကျရျှအခွစေိုကျ ကုနျသညျ တဈဦးက ပွောပါတယျ။
အိန်ဒိယနိုငျငံဟာ ဧပွီလကနေ ဒီဇငျဘာလအထိ ဆနျမှေးမဟုတျတဲ့ ဆနျတငျပို့မှုဟာ အရငျနှဈ ကာလတူထကျ ၃၉ ဒသမ ၅ ရာခိုငျနှုနျး တကျလာခဲ့ပွီး စုစုပေါငျး ပမာဏ တနျခြိနျ ၆ ဒသမ ၂၄ သနျး တိုးတကျလာခဲ့တယျလို့ အစိုးရက ထုတျပွနျတဲ့ ထုတျပွနျခကျြအရ သိရပါတယျ။
ထိုငျးနိုငျငံရဲ့ ငါးမှနျဆနျတဈတနျဟာတော့ ပွီးခဲ့တဲ့အပတျက အမရေိကနျဒျေါလာ ၄၂၀-၄၃၀ ရှိနရောက အခုအပတျမှာတော့ အမရေိကနျဒျေါလာ ၄၀၀-၄၁၉ အထိ ကသြှားခဲ့ပါတယျ။
“ဆနျတငျပို့တဲ့ ကုနျသညျတှကေ အငျဒိုနီးရှား၊ ဖိလဈပိုငျ၊ အီရနျနဲ့ တရုတျလို စြေးကှကျအကွီးကွီး တှကေို စောငျ့နကွေပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခုအထိတော့ ကမျးလှမျးလာတာ မရှိသေးပါဘူး”လို့ ဘနျကောကျ အခွစေိုကျ ကုနျသညျတဈဦးက ဆိုပါတယျ။
“ဒီတဈပတျမှာ စြေးက အပွောငျးအလဲမရှိပါဘူး။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ဆနျစကျတျောတျော မြားမြားက တရုတျနှဈသဈကူးမို့ ပိတျထားကွပါတယျ”လို့ အခွားကုနျသညျတဈဦးက ပွောပါတယျ။
တရုတျနှဈသဈကူးဟာ ထိုငျးနိုငျငံမှာ အစိုးရ ရုံးပိတျရကျမဟုတျသေးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ လုပျငနျး တျောတျောမြားမြားကတော့ အလုပျပိတျကွပါတယျ။
ထိုငျးဘတျစြေးမာနတောကလညျး တဈစိတျတဈပိုငျးအားဖွငျ့ ဆနျစြေးကသြှားစပေါတယျ။
ဗီယကျနမျနိုငျငံမှာကတော့ ဖဖေျောဝါရီလ ၁၄ ရကျကနေ ၂၀ ရကျနအေ့ထိ စြေးကှကျပိတျပါတယျ။
I want to get across my appreciation for your kind-heartedness giving support to those who must have help on that topic. Your special commitment to passing the solution across ended up being remarkably good and has consistently helped somebody much like me to arrive at their dreams. Your personal important publication denotesawhole lotaperson like me and far more to my office colleagues. Warm regards; from everyone of us. jimmy choo shoes [url=http://www.jimmychoo-shoes.us.com]jimmy choo shoes[/url]
by wmvqito@gmail.com at May 16 2019
I truly wanted to sendaquick remark in order to thank you for all of the awesome solutions you are placing on this site. My rather long internet investigation has finally been compensated with useful tips to share with my company. I would express that most of us readers are unequivocally endowed to dwell inamagnificent website with so many perfect people with good techniques. I feel extremely fortunate to have come across your entire webpage and look forward to really more entertaining minutes reading here. Thank you once more foralot of things.
by http://www.nikecortez.us.com at May 12 2019
I am glad for commenting to make you understand whataterrific encounter my friend's daughter went through browsing yuor web blog. She picked up some pieces, which included how it is like to possessagreat teaching mood to let many more completely know precisely some problematic matters. You actually did more than people's expectations. I appreciate you for delivering those interesting, dependable, informative and cool guidance on the topic to Emily.
by http://www.ferragamobelt.us at May 07 2019
သရက်သီးများ၌ ဓာတ်ကြွင်းဓာတ်များ ကျန်ရှိ၊ မရှိ လာရောက်စစ်ဆေးနိုင်
မြေဆီလွှာနှင့် မြေသြဇာ၊ မျိုးစေ့နှင့် သီးနှံကာကွယ်ရေး ဓာတ်ခွဲခန်းမှ မြေဆီလွှာနှင့် ပတ်သက်သည့် ၁၅ မျိုး စမ်းသပ်နိုင်မည်
ပျော့ရွာ လျှပ်စစ်မြစ်ရေတင် စီမံကိန်းမှ ဒေသခံတောင်သူများအတွက် ဈေးကွက်ဝင်သီးနှံများ ပြောင်းလဲ စိုက်ပျိုးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးမည်
စပါးစိုက်တောင်သူများ မျှော်လင့်သော ဈေးနှုန်းရရှိရေးအတွက် ကူညီပေးရန် အစိုးရသို့ ဆန်စပါးအ သင်းချုပ် တိုက်တွန်း
တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကျွဲ၊ နွား တင်ပို့သူများအသင်း(ဗဟို) ဖွဲ့စည်းရန်စီစဉ်